QARAX MAR KALE KA DHACAY DALKA UGANDA – XAMAR POST
By Mohamed Abdi On Oct 26, 2021
Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax Isniintii lala beegsaday bas maraayay meel u dhow caasimadda Uganda ee Kampala, sida ay booliisku sheegeen, iyadoo madaxweyne Yoweri Museveni uu qaraxaasi kusheegay mid ka dhashay bam Buska lasoo saaray.
Qarax kale oo Sabtidii ka dhacay caasimadda dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay hal qof, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen, kaasi oo booliisku uu ku tilmaamay “fal argagixiso ah”, mas’uuliyaddana waxaa sheegtay kooxda Daacish.
Afhayeenka booliiska Uganda Fred Enanga ayaa sheegay in khubaro dhanka qaraxyada ah loo diray degaanka Qaraxa uu ka dhacay oo layiraahdo Lungala ka dib markii isniintii uu qarax halis ah ka dhacay bas ay lahayd shirkadda Swift Safaris abaarihii 5-tii galabnimo
Booliska ayaa dib u saxay War qoraal ah oo uu soo saaray ayna ku sheegay in laba qof ay dhinteen, balse booliska ayaa markii dambe qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in hal qof qaraxa kudhintay.
Enanga ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo laga soo daad gureyay deegaanka.
“Goobta waa la xiray iyadoo laga sugayo qiimeyn iyo baaritaan dhab ah oo ay sameynayaan khubarada bambooyinka,” ayuu yiri.
Enanga ma uusan faah faahin dheeraad ah ka bixin sababaha looga shakisan yahay qaraxa.
Madaxweyne Museveni ayaa sheegay in qofka dhintay ay suurgal tahay in bamka uu gacanta ku haayay.
“Booliska ayaa baaraya in qofka la qarxiyay uu ahaa kii bamka sitay iyo in kale” ayuu madaxweynaha ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.